Taliban Oo war kasoo saartay kulamo ay yeelanayaan Culimo Taageersan Maraykanka.
Tuesday June 26, 2018 - 17:14:25 in Wararka by Super Admin
Imaarada Islaamiga ee Afghanistan ayaa war rasmi ah kasoo saartay kulamo iyo shirar ka furmaya meelo kamid ah caalamka islaamka, kuwaas oo ay isugu imaanayaan culimo kasoo horjeeda Jihaadka, oo taageero ka helaya dowladdda Maraykanka.
Bayaanka kasoo baxay Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan waxaa lagu sheegay in markii dowladda Maraykanka ay ku guul dareystay dagaalka 17 sano jirsaday ee ka socoda Afqaanistaan ay u weecatay dhanka shirqoollada iyo hagardaamada.
Taliyaha ciidamada Maraykanka ee wadanka Afghanistan oo dhawaan hadlayay ayaa sheegay in Dhaalibaan ay ku qaadi doonaan xamlo milliteri, mid siyaasi iyo sidoo kale mid diini ah, taas oo uu kala jeedo iney kulmiyaan culimo dhaleeceysa Mujaahidiinta, waana tallaabada hadda socota.
Dhaalibaan waxay uga digtay culimada iney kaqeybgalaan shirarkaas, islamarkaana ay sabab u noqdaan in isticmaarka qabsaday wadankaas uu waqti dheeraad ah u helo dhibaateynta shacabka muslimiinta, waxaana kulamadaas ay ku tilmaamtay shirqool Ameerikaanku la damacsanyahay muslimiinta.
Shubuhaatka inta badan ay faafiyaan culimada taageersan Reer-galbeedka ayaa bayaanka lagu radiyay, oo ay kamid tahay in mujaahidiintu howlgalladooda ay ku waxyeeloobaan dad shacab ah, waxaana Imaaradu sheegtay iney aad uga taxadaraan dhiiga dadka muslimiinta, hadana mararka qaar ay dhici karto iney waxyeelo soo gaarto dadka muslimiinta.
Bayaanka waxaa lagu sheegay in xitaa haddii dad shacab ah ay wax ku gaaraan howlgallada mujaahidiinta, uusan Jihaadku noqoneynin mid sharci darro ah, iyagoo soo daliishanaya dhacdooyin dhacay xilligii Nabiga SCW iyo saxaabada Ridwaanullaahi caleyhim.
Tacadiyada dowladda Maraykanka ay kula kaceyso umadda islaamka meel welibo oo ay dunida ka joogto ayaa lagu soo hadal qaaday bayaanka, iyadoona lagu sheegay in dagaalka ka dhanka ah Maraykanka ee ka socoda caalamka uu yahay Jihaad dafci ah oo waajib ku ah qof kasta oo muslim ah.
"Culimada waa inay ogaadaan in Maraykanka uu yahay dhaaquudka ugu weyn aduunka, waxay boobeen xuquuqda muslimiinta ee ku nool daafaha aduunka, waxay xoog ku qabsadeen beytul Maqdas oo ah qibladii koowaad ee muslimiinta, iyagoona gabood fallo kala duwan kula kacay muslimiinta ku nool caalamka.” Ayaa lagu yiri bayaanka Imaarada islaamiga ee Afghanistan.
Ugu dambeyn waxaa bayaanka farriin loogu diray culimada muslimiinta, kuwaas oo loogu baaqay in garab iyo gaashaanba u noqdaan mujaahidiinta.
"Waxaan markale ka fileynaa culimada fadliga badan ee ku nool Afghanistan iyo dhamaan caalamka islaamka iney garab iyo gaashanba u noqdaan mujaahidiinta iyo shacabka muslimka ah, halka ay ka qeybgeli lahaayeen shirarka sirdoonnada ay soo abaabuleen, illaa uu Alle nagu galladeysto naxriistiisa, nagana fogeeyo fitnada gumeysiga,madax banaanideena, iyo sharafkeenana uu dib inoogu soo celiyo, arintaasina Alle kuma adka”.